Is faham waa ka taagan Qaabka iyo wakhtiga loo codaynayo Mooshinka ka yaalo Gudoomiye Jawaari – Daily Som
Is faham waa ka taagan Qaabka iyo wakhtiga loo codaynayo Mooshinka ka yaalo Gudoomiye Jawaari
By Staff on March 24, 2018 No Comment
Dood Culus ayaa ka taagan Qaabka ay udhacayso iyo wakhtiga ay dhacayso Codaynta Moowshinka ka dhanka ah Gudoomiyaha Golaha shacabka Maxamed Shkiikh Cusmaan jawaari.
sida uu qabo qodobka 65 aad ee Dastuurka dalka Gudoomuyaha iyo Xigeenkiisa waxaa loogu codaynaa mid qarsoodi ah iyada oo loo fiirinayo Sadex meelood laba meel in ay ucodeeyaa Xioldhibaanada Baarlamaanka, xeer hoosaadka Baarlamaanka ayaa qaba in Muddeynta Mooshinka lagu soo gudbiyo wax ka yar isla markaana Codka loo qaado 10-ka maalin ee xeer-hoosaadka.
Af hayeenka Baarlamaanka ayaa ee ka yaalo Mooshinka ayaa dhawaan uqoray wakiilada beesha Caalamka Warqad uu kaga Codsanayo in ay Codaynta ka dhcado meel ka baxsan Xarunta Golaha shacabka gaar ahaan Xarunta Xalane, taas oo ku ah sumcad daroi baahan Dalka.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah guddiga joogtada ayaa eedeeyn culus usoo jeediyay guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee golaha shacabka Cabdiwali Shiikh Ibraahim Muudey ayaga oo ku eedeeyay in aanu Daacad in la mudeeyo xiliga Mooshinka la horkeenayo Xubnaha Baarlamaanka, iyaga oo sidoo kale sheegay in hada wixi ka dambeeyo ay ka sugayaan arimo siyaasadaysan oo loo soo meeriyay sida ay sheegeen.
Is faham waa ka taagan Qaabka iyo wakhtiga loo codaynayo Mooshinka ka yaalo Gudoomiye Jawaari added by Staff on March 24, 2018